यहाँ म यर्मिया मा प्रचार एक हाल प्रवचन छ 31:33. मेरो मुख्य बुँदाहरू थिए:
Mstoniajohn • अगस्ट 19, 2013 मा 9:31 छु • जवाफ
म मेरो #goodlifebook पायो र म यसलाई प्रेम छु. परमेश्वरले तपाईंलाई यात्रा आशीर्वाद. म प्रभु आफ्नो जीवन witrh गरिरहेको छ के हेर्न प्रेम
स्कट Larrison • अगस्ट 19, 2013 मा 9:31 छु • जवाफ
परमेश्वरको वचन सत्य साझेदारी आफ्नो धन्यवाद. तपाईंको सन्देश मेरो हृदय यो बिहान छोयो. परमेश्वरले तपाईंलाई भाइ आशिष र म मा तपाईं सबै OKC देख्न आशा 10/25.
Cdallenbach1212 • अगस्ट 19, 2013 मा 9:31 छु • जवाफ
प्रभु लागि उर कुरा गर्दै राख्न